Izixhobo zokulinganisa ezingama-40 + zokuphucula ukuThengisa kwakho kwi-Intanethi
Izixhobo ezingama-40, iZilayidi ezingama-40, iMizuzu engama-40
NgeCawa, Agasti 21, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 Douglas Karr
Kwangoko kule nyanga bendinethuba elimnandi lokuhambisa intetho Ibhlog yaseIndiana 2011. Esi sisiganeko esimnandi kuba sesona sikhulu kummandla kwaye ndifumana ukonwaba kuvavanya izinto ezintsha. Le ntetho yayijolise ngokukodwa kubathengisi abalahlekileyo ngokusebenzisa kuphela iphakheji yabo yokuHlaziya ukuphucula iinzame zabo zokuthengisa kwi-Intanethi.
Ukusebenza kweinjini yokukhangela, ukusebenza kweendaba zosasazo, ukuchonga izikhokelo kunye nokuqonda indlela yokuziphatha komsebenzisi kwiphepha okanye kwisiza esilahlekileyo kwi-Analytics. Amaqonga afana noGoogle Analytics, ngokoluvo lwam, kufanele ukuba abe mbalwa kwizixhobo zentengiso xa kufikwa ekuhlalutyweni nasekusebenziseni iindlela zokuthengisa ezihlanganisiweyo. Nantsi inkcazo kunye nokuhanjiswa kwezixhobo ezahlukeneyo kunye neembono ezahlukeneyo abazibonelelayo.
Ngaphandle kokuthengisa kakhulu… yiyo loo nto ndingumlandeli omkhulu Indawo yeWebhu. Xa ndadibana nabo kwiminyaka embalwa edlulileyo, babeyazi into eyenzekayo kolu shishino. Kunye nophuculo olukhulu lwangoku kubahlalutyi iqonga, bandise ngokuqatha ekusebenzeni ngaphandle kwesiza. IiWebtrends zeNtlalontle, iiWebtrends iiNkqubo zeWebhu, iiWebtrends eziSelfowuni, iiNtengiso zeWebtrends… Ukwahlulahlula, ukuLungiselela, ukuHlaziya kwexesha lokwenyani… Iqela libonelela ngezixhobo ezininzi kwaye lizidibanisa ngokucocekileyo ukwenza kube lula kubarhwebi ukuba baphuhlise izicwangciso ezisebenzayo.
tags: uphawu lokubekisa lwentlalo
Yintoni ebacaphukisayo abantu malunga nee-imeyile
Agasti 22, 2011 kwi-3: 49 AM
Sisitaki esikhulu sesilayidi kwaye ibiyinkcazo-ntetho entle kwiBlog Indiana. Kubonakala ngathi sisondele kakhulu kwindlela esicinga ngayo malunga nohlalutyo kunye nokulinganisa.
Oh kwaye uxolo into ye-bit.ly bundle ayizange isebenze. Andisoze ndiphile loo ngcebiso.